Izintshisekelo ezi-6 mayelana neziphepho ezizokumangaza | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Iziphepho yizimo zezulu ezakhiwa ikakhulukazi ezinyangeni zasehlobo zaseNyakatho Nenkabazwe. Kubonwa ezithombeni ezithathwe ngamasathelayithi, ziyamangalisa ngempela, yize iqiniso yilokho kungadala umonakalo omkhulu.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngabo, sizokutshela Izintshisekelo eziyisithupha mayelana neziphepho lokho kuzokumangaza.
1 1.- Isiphepho, unkulunkulu waseMayan
2 2.- Iziphepho, imithombo engakholeki yamanzi
3 3.- Iziphepho neziphepho, ziyefana yini?
4 4.- Iso lesiphepho, indawo enokuthula
5 5.- Isikhathi sesiphepho si ...
6 6.- Amandla amangalisayo omoya wesiphepho
1.- Isiphepho, unkulunkulu waseMayan
Wake wazibuza ukuthi igama elithi "isiphepho" livela kuphi? AbaseMaya bakusungula. Kubo, kwakunguNkulunkulu walowo owabusa phezu kwemimoya, umlilo neziphepho.
2.- Iziphepho, imithombo engakholeki yamanzi
Le micimbi yesimo sezulu ingahle iye phezulu 9 trillion wamalitha amanzi ngosukuNgakho-ke, kubalulekile, kubaluleke kakhulu ukuhlala kude nawe ngangokunokwenzeka, futhi uma kwenzeka ungakwazi, hlala endlini inqobo nje uma kuphephile.
3.- Iziphepho neziphepho, ziyefana yini?
Kunjalo. EMelika naseYurophu sibazi njengeziphepho, kepha entshonalanga yePacific babizwa ngokuthi yizishingishane. Ososayensi bavame ukuzibiza kalula iziphepho ezishisayoNgendlela, yilokho abakubiza ngakho oLwandlekazi lwaseNdiya.
4.- Iso lesiphepho, indawo enokuthula
Isikhungo noma iso lesiphepho yingxenye ethule kakhulu. Ngakho-ke, noma ngabe ucabanga ukuthi konke sekwenzekile, empeleni akunjalo. Le ngxenye ingafika ku-32km, ngakho-ke kufanele ubekezele.
5.- Isikhathi sesiphepho si ...
Ukuze kube nesiphepho, kubalulekile ukuthi ulwandle lufudumale, emazingeni aphansi okushisa angama-20ºC. Ukuze, Isikhathi seziphepho siqala ngoJuni siphele ngoNovemba.
6.- Amandla amangalisayo omoya wesiphepho
Umoya ovela esivunguvungwini ungashaya ngaphezu koku I-250km / h, futhi kubangele amagagasi obude obungaphezulu kwamamitha ayi-5,5.
Ubuwazi ezinye zalezi zilangazelelo mayelana neziphepho?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » Izintshisekelo eziyisithupha mayelana neziphepho ezizokumangaza
UJorge Juan Madroñal Fernandez kusho
Sawubona. Njengesiphathimandla Somthengisi Wezasolwandle kanye netilosi elithile sengidlulile, ikakhulukazi iPacific, uLwandle lwaseChina neziphepho ezinzima eNyakatho ye-Atlantic. Ukubingelela okuhle.? ?
Phendula uJorge Juan Madroñal Fernández
Ngiyabingelela Jorge, ngiyabonga ngokuphawula kwakho 🙂
Imidlalo yevidiyo engu-6 elwa nokuguquka kwesimo sezulu
ISahel, iluhlaza ngenxa yeMedithera efudumele